Kala beddelashada qashin-qubka musqusha iyo Tubooyinka Soo-baxa, Jidhka Weelka Dheriga, Qolka Musqusha | WOW
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Isku beddelka qashin-qubka musqusha iyo pop-up
2020 / 09 / 14 QoondayntaTilmaamaha qasabada 1208 0
Maxay dhammaantood ka walaacsan yihiin ciribtirka iyo beddelka kulanka bullaacadda iyo pop-up-ka ee dhinaca dambe ee saxanka qashinka?
Miyaad u qaban kartaa kuwa aan wax ka beddelayn qasabadda, sida ugu fiican?
Jawaabtu waa hubaal, waxaad awood u yeelan doontaa inaad si fudud u beddesho kulanka qashin-qubka iyo pop-up-ka keligiis. Halka kulankan inta badan lagu soo daro qasabad cusub, waxaad sidoo kale ka heli kartaa shaqsi ahaan dukaamada dukaamada farsamada iyo dukaamada kala duwan ee dhiirrigeliya tuubbooyinka. Beddelka ayaa si fiican ugu dhex jira awoodaha DIY'er kasta.
Ka baxay kii hore
Marka hore, aan ka takhalusno waxyaabihii hore. Ku billow nadiifinta boqortooyada hoosteeda qolka jiifka (oo laga yaabo inaad waxyar ka qabato nadiifinta guga intaad ku sugan tahay!). Baaldi dhig hoosta sasabashada, ka fur labada lows ee ilaalinaya soojiidashada meesha, oo qaado, adoo u oggolaanaya biyaha ku jira daminta inay ku madhan yihiin baaldiga. Keydso kulanka sasabashada - mar dambe ayaad dib u isticmaali doontaa.
Hadda ka raadi dhinaca dambe ee saxanka, oo samee qaybaha. Ka shaqeynta hoosta hoose, waxaad marka hore arki doontaa bir ama tuubbo balaastiig ah oo daba dheeraatay oo soo gashay soo jiidashada, taas oo loo yaqaanno dabada. Taasi waxay kuxirantahay bir bir ah oo kasoobaxaysa saxanka, taas oo ah jirka bullaacadaha. Dhinaca dambe ee saxanka weelka waxaad ku arki doontaa lowska, bir dhaqe iyo caag dhaqe oo dayactiraya muuqaalka dheecaanka meesha. Ku jira saxanka weelka waa bir bir ah oo la jeexjeexay oo ku taal dhinaca dambe ee gadaashiisa ku xirxiraya jirka bullaacadda, oo loo yaqaan flange dheecaanka. Ka soo bixida dabada gadaasheedu waa ul, kubad iyo kulan muhiim ah, taas oo kicinaysa joojiyaha aad ku dhex aragtid saxanka dhexdiisa.
Kala fur lowska ku haya kulanka lafdhabarta meesha, oo kaxayso. Waxaa intaa sii dheer waxaa jiri kara suulka ama guga guga oo usha ku haya. Ka qaad intaas oo dhan, sida ugu wanaagsan. Kala fur lowska baaxadda leh ee haya jirka qashin-qubka hoosta saxanka, kuna qasab daboolka dusha si aad uga furfurto dhalada dhinaca dambe ee saxanka. Si dhakhso leh uga fur furka jirka jirkiisa, taas oo awood u siinaysa inta ka hartay kulanka inay hoos ugu dhacdo saxanka si aad u awoodo inaad ka qaado. Tuur dhammaan qeybihii hore.
Si dhakhso leh u nadiifi oo u qaad wixii dabool ah ee hore, shaabaddi, qalabka goomaha, nadiifinta filimka saabuunta ama walxaha kala duwan, mid kasta oo ka sarreeya iyo hoosta saxanka hoostiisa. Waxaad ubaahan doontaa aagagani inay noqdaan kuwo cad oo qalalan astaanta cusub ee loo sameeyay.
Isha warka: https://www.wowowfaucet.com/
Hore:: Ku ilaali Biyo Adigoon Ka Fakirin Feebahan Eco-saaxiibtinimada Leh Next: Naqshadeynta Aragtida ee abuureysa gudaha qaabka Bal Harbor ee Hill Tide Estates
2021 / 05 / 13 2134
2021 / 05 / 09 1587
2021 / 05 / 08 1427
2021 / 02 / 04 1241
2021 / 02 / 03 1243
2021 / 02 / 03 1229